Ha Tahriibina Dhalinyaroy ee iska jooga” iyo Hadallada kale ee Caalwaaga Ahi Xal Ma Aha. | Voice Of Somalia
Ha Tahriibina Dhalinyaroy ee iska jooga” iyo Hadallada kale ee Caalwaaga Ahi Xal Ma Aha.
Posted on April 21, 2016 by Voice Of Somalia Image
Boqollaal dhallinyaro ah bay baddu liqday dhawaan! Waa masiibo wayn, wayn oo aad u wayn. Intaas oo dhallinyaro ah iyo kumannaankii ka horreeyay, gaajo ma ay saarin, shaqo la’aani may eryan, ee rejo la’aan baa dabada ka kaxaysay. Rejo la’aan bay halaaggaa ugu bareereen.
Rejadadu waa nolosha, nolushu ba waa rejo. Iftiin keli ah oo dantooda, mustaqbalkooda iyo noloshooda waxtar u leh ayey ka dhex waayeen dhulkooda. Inta madaxda u ah, mid keli ah oo dareenkooda ka hadla, u hadla oo ay ku niyadsanyihiin bay ka waayeen. Dhab ahaan, rejo la’aan baa eryatay oo badda ku shubtay.
Haddii aanad shaqo haysan rejo waa aad ku negaan kartaa. Haddii se aad shaqo haysato oo aan rejo jirin, way adagtahay in aad ku waarto. Rejo la’aanta ayaa wax walba ka xun. Dawladda ay ummadi dhisato ee leedahay haddii aanay bulshadeeda rejo u dhisi karin – cayr ba ha ahaatee – dawladnimo hagaagsan marna ma aha.
Hoogga ugu weyni waxa uu yahay dadka aynu wax ka filaynaa in ay xoolo urursi iyo kursi ilaashi u adeegsadaan awooddii ay dadka ugu adeegi lahaayeen. Maanta ma jiro hal mashruuc, oo keli ah oo dan dhallinyaro ama aayohooda wax lagaga qabanayaa. Ma jiro hal qof oo xukuumadda ka tirsan oo si dhab ah dhibaatadan iyo arrimeheeda u qeexaya ama uga hadlaya. Maxaa ka galay ba haddii caruurohoodana ay dibadda u diraan, iyaguna baasaboor mar wal oo wax dhacaan dalka kaga bixi karaan? Ayaa maskaxdaada ku soo dhacaysa.
“Ha tahriibina dhalinyaroy ee iska jooga” iyo hadallada kale ee caalwaaga ahi xal ma aha, noqonna maayaan waligood. Waa masiibo aad u weyn oo ay tahay in loo dhiso hay’ado dawladeed oo si dhab ah u dersa, lafagura oo xal waara ka soo saara. Waa masiibo ka wayn in tacsi laga diro ama lagu eekeeyo ‘Ilaahay ha u naxariisto’ oo keli ah. Kumannaanka kale ee waddanka jooga, dhibtaa og, haddana ka door bidaya in ay nasiibsadaan badda waa in la keenaa qorshe lagu negeeyo. Yaa se diyaar u ah? Ayey waydiintu noqonaysaa.
Inta ninka madaxda ahi marka uu xanuusado cisbital dibadda ah u ordayo, waxbarashada ubadkiisa dibadda ugu dirayo, baasaboor ajanabi ah sito, ee uu shaqadiisa u yaqaanno badbaadadiisa, 500 iyo in ka badaniba badaha ayey ku le’an doonaan. Baroorta hooyooyinka goblamayna waxa ay u arkaan, habar baa iska haw haw lehe heellada innoo tuma.
Inta dhallinyaradu difaacayaan qawlaysatada aayohooda cuna ee ay tolka moodayaan, daawanayaan ciyaarta ma dhalayska ah ee madax-ku-sheeggu jilayaan, aanay se garawsan awooddooda ay ‘Maya’ ku oran karaan, dhibkani waa uu haysanayaa. Inta ay calaacalayaan ayaa uu waqtigu galban doonaa.
Kacaan fikir, wax isweydiin iyo run-ka-hadalnimo ayeynu dhab ahaan u baahannahay. Mid ka dheer cid ku xumayn, ama ujeeddo gaar ah baynu u baahi qabnaa.
Qalinkii: Saddaam Xuseen Carab.
AKHRI:-Gabayga “DHALINYARO”iyo Xaaji Aadan Afqalooc,AUN.